कांग्रेसले शीर्ष नेताको टिकट टुंगो लगायाे, को कहाँबाट लड्ने ? (सूचीसहित) « Naya Page
कांग्रेसले शीर्ष नेताको टिकट टुंगो लगायाे, को कहाँबाट लड्ने ? (सूचीसहित)
काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधि सभा निर्वाचनको लागि शीर्ष नेताहरुको टिकटको टुंगो लगाएको छ। बिहीबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटरमा बसेको कांग्रेस संसदीय समितिको बैठकले शीर्ष नेताहरुको चुनाव क्षेत्र टुंगो लगाएको हो ।
गोविन्दराज जोशीको विरोधका बीच नेपाली कांग्रेसले तनहुँ-१ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई उम्मेदवार बनाउने भएको छ । पूर्वगृहमन्त्री गोविन्दराज जोशीले पनि तनहुँ-१ को टिकट दाबी गर्दै आएका छन् ।